Walii Galan Alaa Galan | QEERROO
Uummatni rakkina mataa isaa furachuu hin dandeenye rakkina ormi biraa wajjin qabu hikkachuuf ayyaana qabaachuu hin danda’u. Burqaan rakkinaa kan maddu walaalumaa irratti. Hawaasa keessatti harki guddaan isaa walaalaa fi doofa tahee yoo jirate namoonni qaroon fedhii isaanii bakkaan gahuuf kan tattaafattan namoota walaala kanaof of dura oofudhaan taha. Warri walaalan yaadni oofan kun mataa isaanii iyyuu boola keessa gashuuf yoo kan deemu tahe tahe naannesanii ilaaluuf beekumsa gahaa hinqaban. Kanaafuu isuma isaanitti himame qabatanii boola seenu malee of duuba deebi’anii maal hojjechaan jiraa? jedhanii of hin gaafatan. Warri ayyaana ilaallatoonni immoo uummatatti bahanii waan isaan dubbatan ifatti dubbatanii of saavila hin baasan.
Walii gala haala deemaa jiruu yoo xinxallee illee ololli deemaa jiru namoota tokko tokko dhuunfaan kan miidhu miti. Kan miidhamuu danda’u qabsoo uummata keenya akka tahe yaroo muraasaaf illee dagachuu hin qabnu. Amma barbaannee nama tokko arbsaa fi abaraa ollee yoo bulle titisa illee irraa kaasuu hin daneenyu. Erga akkas tahee maaliif yaroo keenya fi qabeenya keenya maqaa wal xurreessuu fi waan yakka tahe hojjechuu irratti balleessina? Namoonni ‘social media’ irratti maqaa naaoonis tahe ijaarsaan waan gurri namaa dhaga’uu dhabu oddeessaa ooltan eenyuunuu akka bakka bu’uu hin dandeenye hubachuu qabdu. Utuu sammuu qabaatanii waan jechaa jiran kanatti qaana’uun beekumsa. Silaa walaala keenya gorsachuu fi karaa qajeelaa itti agrsiisuun kan beektotaa fi mangudoota Oromoo Diaspora jiranii taha ture. Yoo warra nuyi ni beekna jennuttu waan fokkisaa kana dhiibaa jira tahe maaliif warra walaalaa kanaan komanna?
Namni diasporaa jiru akkuma biyyaa bahetti hafe jira. Oromoonni biyya keessa jiran waliin tumamanii, waliin dhiitamanii, waliin hidhamanii, waliin ajjessamnii yaroo isaaniif gamu akka nama tokkotti harka wal qabatanii diinaa isaa dura dhaabbachuu murteefatan. Dur isaanis akkuma nama ala kana jiru waa’ee naannoo fi amantii hinuma beeku. Garuu waliin baduu jalaa waan isaan olchuu dideef akka saba tokkotti irree tokkon ol ka’anii diina dura Wayaanee lolu filatan. Har’a uummtani Oromoo intala Oromoo tokkoo fi Ilma Oromoo tokko eessatti akka dhalatte fi dhalate gaafachaa hin jiru. Oromoo tahee nama waraana Wayaanee irra qolatu barbaada. Warraa fagaatee oduu afarsu utuu hin taane warra isaan wajjin dhaabbatee dhiiga isaa fi dhiiga ishee dhangalaasu baruu isaa irratti baata.
Har’a warri olola fokkisaa kana qabatanii as bahan kun eenyu wajjin akka dhaabbatan bareechanii beekuu qabu. Yaroo uummatni Oromoo du’aa fi ajjeechaa keessa jiru ifaanis tahe lafa jalaan warri hojii diinaa gageessaa jiran badii guddaa saba (treason ) isaanii irratti waan raawwachaa jiraniif adaba uummataa jalaa milquu hin danda’an. Har’a gama qabsoo bilisummaa Oromoo kan diiguu fi kan booreessu hunduu hojii Wayaanee hojechaaf akka jiru mami qabachuu hin daneenyu. Waan namootni Oromoo tokko tokko gochaa fi jechaa jiran waraanni Wayaannee caalaa kan qabsoo uummata Oromoo hubuu danda’u danda’u.
Hooggantoonni ABO warri Kayyoo Bilisumma Uummata Oromoo bu’ureesse Caamsaa 15, 1980 waraana Somalee injifatamee aarii guddaa qabu wajjin yaroo adda addatti walitti dhufanii waraanni Somalee Kirstaanii fi Isilaamni gargar bahaa jedhee ajaja kenneef. Silaa kan lubbuu caalu hin jiru: isaaniif garuu Oromummaan lubbuu isaanii caaleef argame. Lakki, nutti Kiristanas miti, Isilaamas miti. Nuti Oromoo dha jedhan wal dhukaa bahan. Waraanni Somalee hunda isaanii bakka tokkotti ajjeessee boola tokkotti awwaalaman. ABO lafee isaaniin ijaaramee, dhiiga isaan latee dagaagee kan asiin gahe dha. Aamma har’a tti gootonni Oromoo kumaatan lakkawwan aarsaa tahanii jiru. ABO yaroo dhiphuu fi hamaa uummata Ormoon ammatame wareegama guddaa baasee jira. Dhugaa kana haaluun seenaa Uumata Oromoo ganuu taha.
Namni hunduu ijaarsa tokko jaalachuu fi gargaaruu hin qabu. Jibuufis mirga qaba. Yoo hin jaallee Ijaarsa biraa ijaaratee qabsoo uummata isaa gargaaruuf haqa qaba. Ijaarsi Oromoo tokko qofaa tahuu qaba namni jedhuu yoo jiraates sirri natti fakkaatu. Bilisummaa booda iyyuu ijaarsi tokko qofaa yoo tahee suuta suuta abbaa irree tahuun ni mala. Biyyi abba irrummaan bulu hormaataa fis tahe nageenya uummataaf bareedaa dha namni jedhu hin jiru.
Yaroo kanatti ,ijaarsonni Oromoo OPDO iyyuu dabalatee dhiiga ilmaan Oromoo akka bishanii dhangalaa jiru kana baraaruu irratti hojjechuu qabu. Garaa garummaan isaan jidduu jiru kan isaan wal dhabamsiisu miti. Sababa adda addaaf yoo waliin hojjechuun rakkisaa tahe illee wal irratti olola oofuu fi maqaa wal xurreessuu dhiisanii amma isaanii danda’amee karaa isaanitti mijjaa’een uummata isaaii wajjin dhaabbachuu qabu. OPDO keessa iyyuu balanii fi kan laasha’uu qaban warra Wayaanneef hojjetan qofa tahuu qabu. Beekumsi keenya qabeenyaa uummata Oromoo waan taheef akkaata itti qabsoo bilisummaa kanaaf bu’aa buusuu danda’utti itti dhima bahuu qabna.
Gaafa waraabeessi dhufu sareen hundi afaan ishee gara waraabessaatti galaglshitee duuti. Gaafa waraabessi darbee walitti galagltee wal nyaatti. Mee ilaalaa sarootuma kana irraa iyyuu waan guddaa barachuun ni danda’ama. TPLF nama Oromoo tahe hundaa lafa irraa haxxaa’aa jirti. Amantii keenyaa fi naannoo itti dhalanne nu hin gaafatu. Nu ajjeessuu fi nu hidhuuf mallaattoon keenya Oromoo tahuu dhuwwaa dha. Warri naannoo tokko abartanis tahe warri naannoo tokko irraa ittisaaf dhaqtan ofumaa hudduu banaa jirtu malee waan isin gargarumaa fidan jiru. Uummanti Oromoo bakka isin jirtan kana biraa kutee jira.
Utuu biyya jiraatanii waan uummatni keenya keessa jiru wajjin hirmaatanii waan ammaan kana jechaa jirtan afaan keessan keessaa hin bahu ture. Waan nagaa hojjechuuf yaroo hin qabdan. Qabsoon uummatni keenya itti jiru akka ala kana taa’anii oduu fi hudduu bulluqisaa oolanii miti. Uummanti keenya ijoolleen isaaa manaa baatee manatti deebi’uu ishee hin beeku. Halkan kana maatii isaa wajjin nagaan buluu isaaf wabii hin qabu. Manni Oromoo hundi mana booyichaa tahee jira. Maaloo , maaloo uummata keenya isaa dhumaa jiruuf jennee waan fokkisaa oofaa jirru kana irraa of haa qusannu. Akkuma jaarsi Oromo biyyaa mucaa isaanii ilaalu dhufanjedhan ,” waan baayyee isin irraa eegachaa turre, isin garuu amma qotee bulaa keenyaa iyyuu hin damaqne. Kana malee rifeensa dibataniif dargageessa of seetu, jaarsi isin keessa hin jiru” kan jedhan waan dhugaa qabu fakkaata. Utuu Jaarsootni diaspora kana keessa jiraatanii hojiin fokkisaa akkasii duruu dhaabbate ture.
Oromoon Yoo Walii galan Alaa galan jedha. Yoo waliif gallle mallee bilisummaan kun fagoo jira. Maaliif wal gufachiisuun barbaachisaa tahe? Waan ofamaa jiru kana irraa eenyu kan bu’aa guddaa argachaa jiru? Qabsoo Bisisummaa uummanti Oromoo oofaa jira jennee yaadnaa Laata? Jaallannus jibbinuus, beeknus walaallus kan itti ejjennee garagaa jiru TPLF. Yaroo kana TPLF qeensa ishee bakka meeqa akka galchitee jirtu yaaduu qabna. TPLF namoota Oromoo bituuf akka horii qalqalaan baatee ala kana keessaa deemaa jirtu erga ifa bahee tureera. Haalli Oromoon wal irratti boba’u kun horii salphaan kan bitamuu danda’amu. Summiin alatti jalqabe kun yoo biyyattis faca’e bareedaa hin tahu jechuuf malee, namni ala jirukana irraa guddaan isaa waan galee uummata isaa wajjin qabsoo godhu hin fakkaatu. Warri qara tahanii waan kana dubbaa taa’aanii ofisaa jiran maqaa uummatichaan waan argame butachuuf malee qabsoo uummataa wareegamuuf qophee waan qaban hin fakkaatu. Kanaafuu maqaa uummta Oromoo dhumaa jiruun ololli fokkisaan kun asuma irratti dhaabbachuu qaba.